Baroka - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Baroka zanak'i Nerià)
I Baroka na Baroka zanak'i Neria dia Israelita tao amin'ny fokon'i Joda, mpianatra sy mpanoratra sady namana mpanaraka an'i Jeremia. Nipoitra tamina fianakaviana malaza izy. Izy no ataon'ny lovantsofina ho nanoratra ny Bokin'i Baroka.
I Baroka, nataon'i Gustave Doré, taona 1866.
Ny anarany amin'ny teny hebreo dia ברוך בן נריה / Bārūḵ ben Nêrîyāh ("Baroka zanak'i Neria"). Ny hoe Bārūḵ dia midika hoe "voatahy" ary ny hoe Nêrîyāh dia midika hoe "Jiroko i Yah" (izany hoe i Yahweh). Atao hoe Βαρούχ / Baroukh izy amin'ny soratra grika.
Nanana rahalahy atao hoe Seraia izy izay nandeha tany Babilona niaraka tamin'ny mpanjaka Zedekia (na Sedekiasa) tamin'ny fahefa-taon'ny nanjakany. I Zerôma (na Hieronimo), ilay nandika ny Baiboly amin'ny fiteny latina (Volgata) dia mihevitra azy ho mpaminany, nefa ny Jiosy ny ny Protestanta dia tsy miombon-kevitra amin'izany. Nitory teny i Baroka tokony tamin'ny taona 606 tal. J.K.
Nentina niaraka amin'i Jeremia tany Tafnesy any Ejipta i Baroka taorian'ny namonoana ny governora Godoliasa izay notendrena ho governora taorian'ny nahababoan'i Nabokôdônôzôra (na Nebokadnezara) an'i Jerosalema tamin'ny taona 586 tal. J.K. Taorian'ny nahafatesan'i Jeremia dia nankany amin'ireo Jiosy (na Jodeana) babo tany Babilona i Baroka. Tamin'ny taona 582 tal. J.K., tamin'ny andro faha-5 amin'ny volana fahadimy (Ava) tamin'ny faha-5 taonan'ny nandoroana an'i Jerosalema, dia tao Babilona i Baroka. Tao no namoahany ireo faminaniany tao amin'ny boky mitondra ny anarany (Bokin'i Baroka) izay tsy misy lahatsoratra tranainy intsony afa-tsy amin'ny fiteny grika.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Baroka&oldid=971495"
Dernière modification le 18 Jiona 2019, à 14:26
Voaova farany tamin'ny 18 Jiona 2019 amin'ny 14:26 ity pejy ity.